Farmaajo oo billaabay ololihiisa doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo billaabay ololihiisa doorashada
Madaxweynaha Muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa kulamo siyaasadeed oo waaweyn ka wada magaalada Kambaala ee Caasimadda dalka Uganda.
KAMPALA, Uganda – Madaxweyanaha muddada sharciga ahayd ka idlaatay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa billaabay ololihiisa gaarga ah ee doorashada, kadib markii hoggaanka iyo hirgalinta doorashooyinka uu ku wareejiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble.
Farmaajo ayaa Kampala u tagay si uu uga qeyb qaato caleema saarka Madaxweynaha Uganda, Yoweri Museveni, oo markii lixaad loo doortay xilka Madaxweynaha dalkaas, wuxuuna halkaas ka billaabay Ololihiisa doorashaday isagoo la kulmaya Madaxweynayaal iyo wasiirro Arrimo dibadeed.
Sida ay sheegtay Madaxtooyada Soomaaliya Farmaajo, ayaa maanta kulan la qaatay Madaxweynaha Burundi Évariste Ndayishimiye, waxaana laga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee ku qotoma dhinacyada iskaashiga ammiga, dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Hayeshee, Sida ay ogaatay Keydmedia Online, Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa wixii ka danbeeyay 1 May 2021, waxa ay u jahaysteen ololo doorasho, waxayna dal iyo dibadba ka raadinayaan taageero dhinac kasta ah.
Inta uu ku sugan yahay Caasimadda Uganda, Farmaajo ayaa la kulmi doona madax kale, waxaana la sii qorsheeyay madaxda Madaxtooyadu la kulmeyso ka hor inta waftiga Farmaajo uusan ka ambabixin Muqdisho 11-kii bishaan.